Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad Kala Socotaa Ololaha Doorashada Madaxtinimada Faransiiska?
Maxaad Kala Socotaa Ololaha Doorashada Madaxtinimada Faransiiska?
Musharaxa lagu magacaabo Benoît Hamon ayaa ku guulaystey doorashadii Xisbiga Hanti-wadaaga ee Socialist Party ee Faransiisku ay ku dooranayeen Musharaxa u tartamaya doorashada Madaxweynaha ee bisha 4aad ee sanakdan aan ku jirro 2017.
Benoît Hamon ayaa ka guuleystey Manuel Vallas oo horey u ahaa Raysalwasaaraha Faransiiska xilkaasna iska casiley dhawaan si uu ugu tartamo musharaxnimada Madaxweynaha ee xibigiisa. Hamon oo ah nin ku fog afkaarta Xisbigiisa ee Hanti-wadaaga ku dhisan ayaa helay 60% codadka la dhiibtay halka ninka la tartamaayey wareega 2aad ee Valls uu helay 40%.
Dhinaca kale doorashada Madaxweynaha ee Faranmsiiska ayaa inta badan marta laba wareeg waxaana wareega u danbeeya isku arki doona laba kamid ah Muharixiinta Xisbiga cunsiriga ah ee loo yaqaano NF haweeneyda la yiraahdo Marine Le Pen, oo ah xisbiga aad u neceb muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah, laguna tilaamo xisbiyada ugu cunsurisan qaarada Yurub oon la gabanin nacaybka ay u qabaan Muslimiinta iyo Muhaajiriinta kusoo qulqulaya qaarada Yurub.
Waxaa kale oo inta badan kula tartama Xisbiga Jamhuuriga ah ee uu musharaxa u yahay Farancois Fillon iyo Xisbiga hantiwadaaga ee hadda doortey Hamon. Wadanka Faransiiska oo qaraxyo iyo weeraro kala duwan ay la beegsadeen kooxo hubaysan oo isku magacaabay inay kamid yihiin ama taageersan yihiin ururada ISIS iyo Al-Qaacida ayaa waxay horseeday in Muslimiinta ku dhaqan Faransiiska aad loo dhibaateeyo.